कांग्रेस विवाद : सहमतिको प्रयास तीव्र- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कांग्रेस विवाद : सहमतिको प्रयास तीव्र
साँझ निधि र सिंहबीच छलफल हुँदै
पुस २९, २०७६ मधुसुधन भट्टराई
काठमाडौँ — का‌ंग्रेसमा पछिल्लो समय बढेको सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहको विवाद समाधानका लागि दोस्रो तहका नेताहरुले प्रयास तीव्र बनाएका छन् । देउवा समूहबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पौडेल समूहबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले विवाद साँघुर्‍याएर सहमतिको आधार तयार गर्न म‌ंगलबार साँझ छलफल गर्ने पौडेल समूहका केन्द्रीय सदस्य दीलेन्द्र बडुले बताए ।
गत आइतबार सभापति देउवाले नेता पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भेटी केन्द्रीय समितले बहुमतबाट गरेका निर्णय सच्च्याउन आफू तयार रहेको बताएका थिए ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले २०७७ मंसिर ९ गतेबाट अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई अगाडि सारेर दसैं र तिहारकै बीचबाट अधिवेशन सुरु गर्नेगरी मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । ‘केन्द्र र प्रदेशको महाधिवेशनको मिति यथावत राख्दै बाँकी ६ तहका अधिवेशन सारेर सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मंसिर ९ गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय भएको वडा अधिवेशन दशैं र तिहारबीचबाट गर्ने गरी अनौपचारिक सहमति बनेको छ ।’
स्रोतका अनुसार १४ औं महाधिवेशनको मिति यथावत राखेर मातहतका अधिवेशनको मिति सार्ने, महाधिवेशन प्रयोजनार्थ विधानका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय सच्च्याउने र विभाग बढाउने निर्णयमा सहमति खेज्न देउवा तयार भएपछि सहमतिका लागि अनौपचारिक प्रयास सुरु भएको हो ।
पौडेल र सिटौला समूहको बहिष्कारबीच सभापति देउवाले कार्यतालिकासहित १४ औं महाधिवेशनको मिति तोकेका थिए । महाधिवेशन प्रयोजनार्थ विधानका धारा ४, ३५ र ५० का केही व्यवस्था खारेज, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने र पार्टीका विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४७ पुर्‍याउने निर्णय पनि देउवाले बुहमतबाट गरेका थिए ।
विवाद समाधानमा सक्रिय एक नेताका अनुसार महाधिवेशन प्रयोजनार्थ विधानका धारा निलम्बन गर्ने निर्णय सच्च्याउन सभापति देउवा तयार भएका छन् । ‘अहिलेका लागि धारा निलम्बन गर्ने निर्णय फिर्ता लिने र निलम्बन गर्नु पर्ने भएमा पछि सहमतिमा केद्रीय कार्यसमिति बैठकबाट फेरि निर्णय गर्न सभापति तयार हुनु भएको छ,’ ती नेताले भने ।
विभाग बढाउने निर्णयमा पनि सहमति खोज्न संस्थापन तयार देखिएको छ । ‘अहिलेको निर्णय फिर्ता लिएर सहमतिमा बढाउन परे बढाउने, नभए विधानमा भए बमोजिमका विभागमा भागबण्डा गरेर मिलाउन गठन गर्नेगरी अनौपचारिक तयारी भइरहेको छ,’ सकभर दुवै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुनेगरी मिलाउने प्रयासमा हामी छौं,’ देउवा समूहका नेताले भने । उनका अनुसार भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको विषयमा भने सहमति जुटेको छैन ।
देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले नेताहरुबीचको आइतबारको छलफलपछि विवाद साँघुरिएको बताए । ‘उहाँहरुबीच गहन, गम्भीर र महत्वपूर्ण छलफल भयो । त्यो बसाईले विवाद समाधान गर्ने विषयलाई सहज बनाएको छ,’ लेखकले इकान्तिपुरसित भने, ‘दुवै पक्षलाई मान्य हुनेगरी सहमति बन्छ ।’
माघ ५ गतेभित्र सहमति बन्ने नेताहरु दावी गर्छन् । ‘५ माघभित्र कांग्रेसमा देखिएको विवाद अन्त्य हुन्छ र महाधिवेशनका लागि अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण हुन्छ,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसको गृहकार्य अन्तिम तयारीमा पुगेको छ ।’
पौडेल समूहका केन्द्रीय सदस्य बडूले विवाद साँघुरिएको बताए । ‘शीर्ष तहमा बहुमतका निर्णय आवश्यकताअनुसार सच्च्याउने सहमति बनेको छ, त्यहीअनुरुप पार्टी महाधिवेशन सहमतिमा गर्नेगरी सहमति जुटाउन हामी लागिरहेका छौं,’ बडूले ईकान्तिपुरसित भने, ‘उपसभापति विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंहबीच आज साँझ छलफल हुँदैछ । त्यसले विवाद अझ साँघुर्‍याउनेछ । २/३ दिनमा सहमति जुट्ला । र, हामी महाधिवेशनका काम गर्नतिर लाग्छौं ।’
गत मंसिर २६ गतेबाट सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको एजेन्डामा महाधिवेशनको कार्यतालिका समावेश नगरेको भन्दै बहिष्कार गरेको पौडेल र सिटौला समूहले पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ । पुस १७ गते बसेको राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार छान्ने एजेन्डा रहेको बैठक पनि असन्तुष्ट पौडेल समूहले बहिष्कार गरेका थिए ।
कांग्रेस विवाद : कहाँ छन् युवा नेता ?
प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १६:५३
काठमाडौँ — सभामुख कसलाई बनाउने भनेर सत्तारुढ नेकपाभित्रको 'घरझगडा' चलिरहेको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल आ-आफ्ना उम्मेदवार तयार पारेर एकअर्कालाई गलाउने नीतिमा अडिग छन् ।
ओलीले सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान लिएका छन् भने दाहालले अग्नी सापकोटालाई अगाडि सारेका छन् । नाममा पुनर्विचार गर्न सकिने तर एकता पहिलेको भागबण्डाअनुसार पूर्वमाओवादीले सभामुख पाउनुपर्ने दाहालको तर्क छ । यसबीचमा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू स्वतः सभामुख बन्नुपर्ने अडान राख्दै आएकी छन् । नेकपा सचिवालयले उनलाई पदबाट राजीनामा दिन सुझाव दिएको छ । तर, उनले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेकी छन् । सभामुखलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच चलिरहेको संघर्ष र उपसभामुखको अडानलाई लिएर समाचार संस्था 'न्यूज एजेन्सी नेपाल'ले डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेसँग गरेको कुराकानी :
अहिले संसदमा गतिरोध देखिएको छ । यो कहिलेसम्म रहन्छ ?
यो गतिरोध कहिले अन्त्य गर्ने भन्ने निर्णय प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त दल नेकपाको हातमा छ ।
गतिरोधको एउटा पात्र तपाईं पनि हो । नेकपाले तपाईंको राजीनामा मागेको छ तर तपाईंले दिन मान्नु भएको छैन नि ?
कुरा ठीकै हो । सभामुख पद रिक्त रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभालाई नेतृत्व प्रदान गर्ने उपसभामुखले नै हो । त्यसकारण उपसभामुख केन्द्रविन्दुमा रहनु स्वभाविक हो । यसलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।
मैले पनि सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको हुँ नेकपाले राजीनामा दिन निर्देशन दिएको छ भनेर । तर, एउटा स्वतन्त्र संस्थाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई कुनै एक दलले नेतृत्वबाट बाहिर जाउ भनेर भन्न संविधानतः मिल्दैन । अहिले म एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ । जतिबेला मलाई दलले उम्मेदवार बनाएर म निर्वाचित भएँ त्यसपछाडि मैले दल त्याग गरेकी छु ।
दलले निर्देशन दिँदा पनि अटेर गर्‍यो भन्ने पनि सुनेकी छु । प्रतिनिधिसभा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो । अहिलेको अवस्थामा त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेकी छु । नेतृत्व गरिराखेको व्यक्तिलाई कुनै एक दलले राजीनामा दिएर बाहिर निस्क भन्न मिल्दैन । यदि दलले आफ्नो उम्मेदवार टुंग्यायो भने बैठकमा सभामुखको निर्वाचन प्रकृयालाई अगाडि बढाएर म राजीनामा गर्छु । त्यसपछि सभामुख र उपसभामुख पद खाली हुन्छ । निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढ्छ । त्यसो गर्दा प्रतिनिधिसभा छोटो समय मात्रै नेतृत्वबिहीन रहन्छ । संविधान सबैभन्दा ठूलो हो । संविधानले निर्देशित गरेर राष्ट्र चल्छ, राज्य चल्छ । त्यसमातहत रहेर नै सबै दलहरु चल्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसो त पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई पनि राजीनामा देउ भनेर नेकपाले निर्णय गरेको थियो । अहिले उपसभामुखलाई चाहिँ नमिल्ने ?
प्रतिनिधिसभा एउटा स्वतन्त्र संस्था हो । दल एउटा संस्था हो । राजनीतिक दल पनि ऐनअनुसार दर्ता भएर चल्छ । प्रतिनिधिसभा संविधानमार्फत् चल्छ । दललाई पनि संविधानले नै हिँडाएको हुन्छ । यी दुई संस्था फरकफरक ढंगले चल्ने हुन् । अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गरेको व्यक्तिलाई राजीनामा दिएर छोड भनेर पार्टीले निर्देशन दिन मिल्दैन । निर्देशन उपसभामुखलाई दिन मिल्दैन तर सभामुखलाई मिल्यो किनभने उहाँ कुनै घटनामा जोडिनु भएको थियो । फरक प्रसङ्गलाई फरकफरक तरिकाले नै बुझ्न जरुरी हुन्छ ।
त्यसो भए राजीनामा दिनुहुन्न ?
संविधानको धारा ९१ को उपधारा १ देखि ६ सम्म जाँदा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसमा पनि एक महिला अनिवार्य भनेको छ ।
अहिले सभामुख पद रिक्त छ । म त्यही दलले उम्मेद्वार बनाएर उपसभामुख बनेकी हुँ । सभामुख पद सत्तापक्षले लिने भनेपछि मैले मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेकी थिएँ । र, अहिले पनि भनिरहेकी छु । दलले राजीनामा देउ नभने पनि मैले दिनुपर्छ । निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाउने क्रममा मैले राजीनामा दिन्छु भनेर तयारी अवस्थामा बसेको थिएँ ।
त्यसो भए राजीनामा दिन किन रोकियो त?
निवर्तमान सभामुख जो हुनुहुन्थ्यो उहाँ कुनै घटनासँग जोडिनुभयो र उहाँले राजीनामा दिनुभयो । मैले केही बदमासी काम त गरेको छैन् नि राजीनामा दिन । पाँच वर्ष काम गर्न पार्टीले पठायो । २ वर्ष बित्यो अब ३ वर्ष बाँकी छ । मैले कुनै फट्याईं गरेको छैन, बदमासी गरेको छैन, यौन दुराचार गरेको छैन, भ्रष्टाचार गरेको छैन भने के चार्ज लगाएर मलाई दलले निकाल्न मिल्छ ? यो कारणले गर्दा म सभामुख पदको दाबेदार हुँ ।
तपाईंले पहिला नै राजीनामा दिँदा सहज हुन्थ्यो कि ?
मैले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेर भनेकै छु । संविधानले प्रतिनिधिसभा नेतृत्वबिहीन हुन्छ भनेर परिकल्पना गरेको छैन । नेतृत्व प्रदान गर भनेर मलाई सपथ खुवाएको छ ।
दलले उम्मेदवार तय गरेर ल्याएपछि म राजीनामा दिन्छु । बैठक ६ गते १ बजे बोलाएकी छु । एक बजे अगाडि हामी बानेश्वरमा हुन्छौं । मसँग सबै तयार अवस्थामा हुन्छ । बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यले गर्नुहुन्छ । र, उहाँलाई मैले मेरो राजीनामा दिन्छु । उहाँले पढेर सुनाउनुहुन्छ । त्यसपछि म एक सांसदमात्र हुन्छु । यो प्रकृया अपनाउँछु । जतिबेला संसद एकदम छोटो, केही मिनेटमात्र खाली हुन्छ । दिनको त कल्पनै नगरौं ।
कत्तिको दबाब झेलिरहनु भएको छ ?
मलाई कसैले केही दबाब दिएको छैन । पार्टी नेतृत्वले दबाब दिए पनि तपाईंले आफ्नो अडान छोडनु भएन, सही काम गर्नुभएको छ, एउटा स्वतन्त्र संस्थालाई तपाईंले निरन्तर नेतृत्व प्रदान गर्नुस भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ । यो प्रतिनिधिसभाप्रतिको माया हो ।
प्रकाशित : पुस २९, २०७६ १६:४८